HomeCaafimaadJimicsiga Guska lagu weyneeyo laguna adkeeyo si dabiici ah
Jimicsiga Guska ee si dabiici ah lagu weyneeyo.
How to get big penis without problem.
Qof kastaa wuxuu jeclaan lahaa in loo maleynayo inuu yahay nin adag, ( get bigger penis now)? )
laakiin kuwa guska yar ayaa ka xishoonaya inay dharkaa iska saaraan ayagoo ka walwalsan yaraan guskooda.
Laakiin Waxaa jira jimicsi si dabiici ah u kordhin kara dhererka iyo ballaca ee guskaaga, laakiin waa in si haboon loo sameeyaa si waxtarka jimicsiga aad u hesho.
Waxaan soo qaadaneynaa 2 siyaabood oo guska lagu weyneeyo adigoo ku daraya xagga dhirirka iyo ballaca.
Siigeysiga maahan tan ay soomalidu taqaan oo ah in gacantaada biyaha isaga keento, oo jimicsigaan lama ogola in shahwada kaa timaado, waxaadna ka ilaalineysaa gacntaada guska madaxiisa meeshaas oo xasaasi ah dareenkana u nugul.
Websaytka MaleEnhancement.org wuxuu sheegay in farsamadani tahay jimicsi dabiici ah oo guska weyneysa xagga dhirirja iyo ballaca. Waxaa la sameeyaa jimicsigaan inta uu guskaagu ku dhow yahay gebi ahaanba kacsiga ugu dambeeya, sababtoo ah layligani wuxuu sababi karaa dhaawac haddii lagu sameeyo xubin si buuxda u kacsan. Waxaad u baahan tahay inaad marsato boomaato guska , waayo ma sameen kartid guskaada oo qalalan, oo isticmaal suulka iyo fartaada si aad u sameysid jimicsiga adigo ka bilaabaya salka danbe ee guskaaga. Si tartiib ah uso daliig guskaaga korna ugu jiid suulka iyo farta xaga dhererka guskaaga. Jooji markaad gaarto madaxa guskaaga oo ku celi gacantaada kale sido kale waxaana sameysa inta aadan sii daayn gacanta kale kuso bilow.
Waxaad u baahan tahay inta aad ku gudo jirto jimicsigaan siigeysiga ah shukumaan iyo biyo diiran si aad u kululeyso gusk.
Shukumaanka dhex gali biyaha diiran ka dib ku duub guska mar walba oo aad guska u sigeyso inta aadan bilaabi tan kale waxayna kaa caawin doonta in dhiig fiican uu helo guska taaso ku siineysa wax tarka saxda ah.
Websaydhku wuxuu qorayaa in mar walboo sameyneyso daliiga uu qaadanayo dhowr ilbiriqsi, wuxuuna ku talinayaa qofka bilawga ah inuu ku bilaabo 100 mar halki mar uu jimicsi siinayo guska. Waqti ka dib, kor u kaca ilaa 500 mar ha gaaro.
2: Jiid Guska.
Farsamadan waxaa lagu talinayaa inay noqoto hab wax ku ool ah oo lagu kordhinayo dhererka guskaaga.
Iyadoo Website yada ka hadla arimaha caafimaadka ay isku raaceen farsamadaan iney tahay mid ugu fiican.
Waxaa la sameeyaa inta uu guskaagu uusan kicin, waana in lagu celiyaa inta u dhexeysa 10 ilaa 15 jeer si waxtar leh. Qabo guskaaga jilicsan madaxiisa horay u jiid ilaa xadka ugu sareeya.ku hay ilaa 15 ilbiriqsi ka hor inta aadan sii deyn. Goobta internetka ee "Free Penis Enlargement Guide" waxay soo jeedineysaa in rux ruxdo guskaada markaad jiito kadibd si murqaha ay u nastaan ileen gusku waa muruq inta aadan ku celin mar kale jiidintaanka si uu u caawiyo nasinta murqaha. Waxaad sidoo kale ku kala bixin kartaa guskaaga midig iyo bidix inta lagu guda jiro jimicsigan, sida laga soo xigtay bogga intarnetka ee ka hadla arimaha guska.
Waxaan sameyneysaa arintaa 5 ilaa 7 jeer maalin walba in dhan muddo afar asbuuc ah. Waxaana sameyneysaa jimicsiga adiga oo taagan. Si aad u hesho wax tarka jimicsiga.
Warbixintaa waa mid aan uga soo qaadanay sida ay u qoreen boga caafimaadk ee xubinka taranka ragga.
Hadii aad suaal qabto ku saabsan arimaha xubinka taranka hoos ku reeb faallo.
This is the best way to increase your penis size
IIBSO ANY NEED July 28, 2020 at 8:49 PM
Thank you barather